ISIKHALA, IZINTO EZISETSHENZISWA KANYE NEKUMINA KUHLALE KUBALULEKILE Isikhala esiminyene, amazinga aphezulu, kanye nokuhamba ngomkhumbi okuyize ezimpahleni zasolwandle, ikakhulukazi ekuhwebeni okubheke empumalanga, kuholele ekwakhekeni kwesiminyaminya nokushoda kwemishini manje osemazingeni abucayi. I-Air Freight nayo iyakhathaza ...
IZICATHULO ZIHLOLA INDLELA YAKHO
Njengoba sonke sazi ukuthi umgomo wawo wonke umuntu wokufunda ukuba muhle futhi aguge wukudala isitayela sakhe esikhethekile, esibhekisela ekuhlanganiseni okuphelele kwesimo somuntu nezingubo zokugqoka. Ngaphambi kwalokho, sidinga ukuthola ukuthi siyini isitayela sezingubo, bese si ...
I-Nanchang B-Land Shoes Manufacturing CO.,LTD iphumelele i-BSCI,Okulandelayo,Fat Face,Barbour Audit. Imboni inohlelo lokuqeqesha lwe-QA ne-QC. Kwenziwe isethi egcwele yesampula yangaphambi kokukhiqiza ngaphambi kokukhiqizwa ngobuningi.Amasampula angaphambi kokukhiqiza agunyazwe iklayenti agcinwe esesimweni esihle. Amarekhodi ezinto ezingavuthiwe, eziku-inthanethi kanye...